Carrera y Carrera: Portraits ရှိလက်ဝတ်ရတနာများ
ဘ‌‌လော့ခ် သမိုင်းနှင့်အမွေအနှစ် စိတ်ဝင်စားခြင်း
Carrera y Carrera: ပုံတူမှရတနာ
စက်တင်ဘာလ 29, 2014
ရတနာသည်အနုပညာဖော်ပြမှုပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး Carrera y Carrera သည်၎င်းကိုအမြဲတမ်းသတိရသည်။ ဖာဒီနန် ၇ သည်သူ၏နန်းစံစတင်ပြီးတစ်ချိန်ချိန်တွင်ရတနာကိုရုက္ခဗေဒဆိုင်ရာစုဆောင်းမှုဖြင့်ပံ့ပိုးထားသောသဘာဝတရား၏လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်အလှဆင်သည့်အရာအဖြစ်အာရုံစူးစိုက်သောအနုပညာလှုပ်ရှားမှုအသစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာသည်။
ပန်းပွင့်နှင့်ပွင့်ချပ်များပေါများမှုကြောင့်ဤလက်ဝတ်ရတနာပုံစံကို Isabella II နန်းစံကာလအတွင်းတီထွင်မည်ဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့် Federico de Madrazo (1815-1984) ၏လက်ရာတွင်ထင်ရှားသည်။
Carrera y Carrera သည်ထိုအချိန်က Madrazo ၏ပုံတူများတွင်ထည့်သွင်းထားသောအထင်ကရစပိန်လက်ဝတ်ရတနာအမှတ်တံဆိပ်များကိုထည့်သွင်းရန်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုယူခဲ့ပြီး CyC ၏စုဆောင်းမှုများစွာ၏သဘောသဘာဝအရရတနာပစ္စည်းများမှုတ်သွင်းထားသည့်ရတနာဖြစ်သည်။
Queen Isabela II ကို, 1850
ဘုရင်မ Isabella II ကိုIsabelina"ရတနာ၏ကြီးစွာသောပန်ကာဖြစ်ခဲ့သည်။
Narvaez နှင့် Bravo Murillo တို့၏အစိုးရများသည် ဆက်လက်၍ ပါတီများ၊ ပြဇာတ်ရုံနှင့်အခမ်းအနားများကဲ့သို့သောလူမှုရေးနှင့်အပန်းဖြေရေးလှုပ်ရှားမှုများအပြင်နိုင်ငံရေးသမားများ၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များနှင့် (ယခင်ကာလအတွင်းပြည်ပရောက်ခဲ့ကြသော) မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်များကစပိန်သို့ပြန်လာကြပြီး၊ နှင့်ပဲရစ်၏အကောက်ခွန်။
Federico de Madrazo ၏ဤပုံတူတွင်ဘုရင်မဝတ်ဆင်သည့်ပုလဲနှင့်ပုလဲကျောက်မျက်ရတနာများစွာကိုတွေ့နိုင်သည်။ The gardenias Carrera y Carrera ၏ရွှေဝါရောင်၊ စိန်နှင့်ပုလဲလက်စွပ်များသည်ဤပုံတူ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
Federico de Madrazo, Queen Isabella II, 1850. နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊ ရောမ၊ အီတလီ။
Elizabeth WARRINGER, 1852
Federico de Madrazo ၏ရတနာဆိုင်ရာအသေးစိတ်ပန်းချီကားများကိုအထူးပြုခြင်းသည်မိသားစုလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ သူ၏ယောက္ခမ Rafael Garreta သည်ဖာဒီနန် (၆) ၏ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်၏သမီးနှင့်လက်ထပ်သည့်ကျော်ကြားသည့်မက်ဒရစ်ရတနာဖြစ်သည်။ သူ၏ရတနာဆိုင်သည် Carrera de San Jerónimoတွင်တည်ရှိသည်။ Federico ၏သား Raimundo de Madrazo ၏အဆိုအရသူ၏အဘိုးအဘွားများသည်စပိန်သရဖူရတနာတစ်ခုဖြစ်သော La Peregrina ပုလဲကဲ့သို့သောအရေးကြီးသောပစ္စည်းများကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်Velázquezမှအကြိမ်များစွာပန်းချီဆွဲခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်အထင်ကရဟောလိဝုဒ်မင်းသမီးအဲလစ်ဇဘက်တေလာမှပိုင်ဆိုင်သည်။
Federico de Madrazo သည်စပိန်မူပိုင်ကိုပုံတူရေးဆွဲရုံသာမကအင်္ဂလန်မှ Elizabeth Wethered Barringer ကဲ့သို့သောနိုင်ငံခြားအမျိုးသမီးများကိုပါပန်းချီဆွဲခဲ့သည်။ ဤကိစ္စတွင်ပန်းချီကား၌ဝတ်ဆင်ထားသောဘရိုရှာကိုရွှေလင်းတကဲ့သို့ပုံဖော်ထားပြီးထိုအချိန်ကစပိန်လက်ဝတ်ရတနာများတွင်ထူးခြားသည်။ အဆိုပါလှုံ့ဆော်မှုသည်သဘာဝကိုယ်စားပြုမှုနှင့်အင်္ဂလန်တွင်ခွေးများနှင့်မြင်းများကဲ့သို့တိရိစ္ဆာန်ပုံသဏ္ဌာန်ရတနာများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်။
တိရိစ္ဆာန်ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူရတနာ၏ဒီဇိုင်းကိုစတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကတည်းက Carrera y Carrera မှာအစဉ်အလာဖြစ်ခဲ့သည်။ မှပိုင်ဆိုင်အဝါရောင်ရွှေအတွက်လင်းယုန်လက်ကောက် ညစာစား စုဆောင်းခြင်းperfectlyုံဒီစတိုင်ဖော်ပြသည်။
Federico က de Madrazo, Elizabeth လိရှဗက်ရေခဲ Barringer, 1852. အော့ကလန်အနုပညာပြတိုက်, Chapel Hill, မြောက်ကာရိုလိုင်းနား, အမေရိကန်။
CONCEPCIÓN REMISA DE MORET, ၁၈၅၆
Federico de Madrazo သည်သူ၏တစ်ခေတ်တည်းသားများထက်သာလွန်သည်မှာသူ၏ပုံတူများ၌မက်ဒရစ်တွင်မြင့်မြတ်သောလေထု၏အလင်းရောင်ကိုဖမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်။ သူသည်အဝတ်အစားများနှင့်လက်ဝတ်ရတနာများ၏သစ္စာ ရှိ၍ ကြမ်းတမ်းစွာကိုယ်စားပြုမှုကြောင့်၎င်းလူများသည်သူတို့၏လူမှုအဆင့်အတန်းကိုဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာဖြင့်ပန်းချီရေးဆွဲသူအားလုံးကိုသူနှစ်သက်ခဲ့သည်။
Concepción Remisa သည် Isabella II ရှိစပိန်နိုင်ငံတွင်အရေးကြီးဆုံးဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည့် Gaspar de Remisa ၏သမီးဖြစ်သည်။ သူမသည်နိုင်ငံရေးသမားနှင့်စာပေပညာရှင် Segismundo Moret နှင့်လက်ထပ်ခဲ့ပြီး၊ ပုံတူပန်းချီကားကိုပန်းချီဆွဲရန်ပန်းချီဆရာ Federico de Madrazo အားရွေးချယ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ Granada Carrera y Carrera မှရွှေဝါရောင်နှင့်ရှဟံကျောက်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဆွဲကြိုးသည်Concepción၏သွင်ပြင်လက္ခဏာကိုအလှဆင်ထားသောရွှေ၊ ပုလဲလည်ဆွဲနှင့်နားကပ်များအတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာဖြစ်သည်။
Federico de Madrazo, Concepción Remisa de Moret, 1856. Prado ပြတိုက်၊ မက်ဒရစ်၊ စပိန်။
BURBON ၏ INFANTA LUISA FERNANDA, 1851
ခေတ်ကာလ၏ကျောက်မျက်ရတနာများသည်ဗိသုကာပုံစံများနှင့်အလယ်ခေတ်ဒဏ္fromာရီများမှသေးငယ်သောပန်းပုရုပ်ပုံများမှပုံဆောင်ရုပ်ပုံများဖြင့်မှုတ်သွင်းထားသောလက်ကောက်၊ ဤခေတ်၏အစောပိုင်းနှစ်များတွင်နုပျိုသောအရွက်များနှင့်ပန်းများနှင့်အဖြစ်မှန်အပေါ်သစ္စာရှိသောပုံဆောင်စတိုင်ကိုအာရုံစိုက်ကာပညာရေးဆိုင်ရာပုံစံကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ဤသဘာဝဒီဇိုင်းများသည်နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်လူကြိုက်များခဲ့သည်။
Bourbon မှ Infanta Luisa Fernanda သည်ဤပုံတူတွင်ရတနာများစွာကိုဝတ်ဆင်ထားသည် - ပုတီးဆွဲ၊ လည်ဆွဲ၊ လက်ကောက်၊ အားလုံးသည်ရွှေ၊ စိန်များ၊ ပုလဲများနှင့်ပတ္တမြားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပုံရသည်။
အဆိုပါ sol y က Sombra Carrera y Carrera မှရွှေဖြူနှင့်စိန်များမှနားကပ်များသည်ထူးခြားသောစပျစ်သီးအရသာကိုပိုင်ဆိုင်ပြီး၎င်းကိုတွန်းလှန်နိုင်ပြီးခေတ်သစ်ဂန္ထဝင်ဖြစ်စေသည်။ Bourbon မှ Infanta Luisa Fernanda သည်ထိုပုံတူများထဲမှတစ်ခုအားအကောင်းဆုံးဝတ်ဆင်လိမ့်မည်မှာသေချာသည်။
Federico de Madrazo, ဘာရိုဘာ၏ Infanta Luisa Fernanda, 1851. Palacio Real, Madrid, Spain ။
Isabel ÁLVAREZ MONTES, CASTRO ENRÍQUEZ Y VALDERA ၏ ၂ ကြိမ်မြောက် MARCHIONESS, ၁၈၆၈
Federico de Madrazo ၏ထူးခြားချက်မှာပန်းချီကားချပ်သူများ၏အင်္ကျီများသည်သူတို့၏ခမ်းနားထည်ဝါမှုအားလုံးတွင်ရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သည့် courtly ပုံတူများဖြစ်သည်။ ထိုပုံတူများတွင်ဆင်မြန်းများ၏အထည်များ၏အရည်အသွေး၊ အပိုပစ္စည်းများနှင့်ရတနာများသည်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ played မှပါ ၀ င်ခဲ့သည်။
Federico de Madrazo သည်သူ၏ပန်းချီကားများတွင်သူဖော်ထုတ်မည့်ရတနာများကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်လေ့လာခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှုများတွင် Madrazo သည်ရတနာများကိုနောက်ဆုံးပုံတူတွင်မည်ကဲ့သို့ကိုယ်စားပြုရမည်ကိုမှတ်သားထားပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ရွှေရောင်၊ ကျောက်မျက်အမျိုးအစားနှင့်ကျောက်မျက်ရတနာများတွင်မြင်နိုင်သောရောင်ပြန်ဟပ်မှုများ…သူသည်ရတနာများကိုသက်တမ်းအရှည်ဆွဲခဲ့သည်။ သူ၏ပုံတူအဖြစ်မှန်မှတတ်နိုင်သမျှအနီးကပ်ဖြစ်။
Castro Enríquez၏ Duchess of the ပုံတူတွင်သူသည်ရတနာအမျိုးမျိုး၊ လက်ကောက်များနှင့်သုံးကြိုးမျှင်ပုလဲလည်ဆွဲများကိုဝတ်ဆင်ထားသည်။ အပြာရောင်အသေးစိတ်ပါသောသူမ၏ ၀ တ်စားဆင်ယင်အတွက်အပိုပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည် aqua Carrera y Carrera မှရွှေဖြူ၊ စိန်များနှင့်မျက်နှာအပြာအပြာပါဇင့်သည်အကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
Federico de Madrazo: Isabel vlvarez Montes၊ Castro Enríquez၏ဒုတိယမြောက် Duchess နှင့်2မတ်လ de Valdera, 2. Prado ပြတိုက်၊ Madrid၊ စပိန်။
ပေါ်တူဂီ၏ယောသပ် COELLO, 1855
ဤအချိန်ကာလအတွင်းပုံတူထိုင်သူများအနေဖြင့်ရတနာတစ်ခုတည်းကိုဝတ်ဆင်လေ့ရှိသည်။ မသေနိုင်သည့်အမျိုးသမီးကိုတန်ဆာဆင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရေးကြီးသည့်ရတနာသည်လက်ကောက်ဖြစ်သည်။ ပေါ်တူဂီမှမစ္စစ်ဂျော့စ်ဖာကိုလို၏ပုံတူသည်ဤလမ်းကြောင်း၏ထင်ရှားသောဥပမာဖြစ်သည်။ လက်ျာလက်၌ ၀ တ်ဆင်ထားသည့်လက်ကောက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်လှည့်စားသောရိုးရှင်းသောပုံတူဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ရွက်လွှင့်ထားသောလှေများနှင့်တွားသွားသတ္တဝါငါးမျှားနေသောသင်္ဘောတစ်စင်းကိုပုံဖော်ထားသည်။
ပေါ်တူဂီမှမစ္စစ်ဂျို့စ်ဖာကလိုလိုသည်ဤပုံတူတွင်ဝတ်ဆင်နိုင်သည့် Carrera y Carrera ရတနာတစ်ခုဖြစ်သည် ပန်းချီဆရာ လှပသောအဝါရောင်နှင့်အဖြူရောင်ရွှေဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသောစိန်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလက်ကောက်။ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကြေငြာဆိုပါစို့ကြောင်းလက်ကောက်။
Federico de Madrazo - ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ Josefa Coello၊ ၁၈၅၅။ Prado ပြတိုက်၊ မက်ဒရစ်၊ España။
SOURCE မှ: Carrera y က Carrera, La Joyeria Romantica ကိုရည်ညွှန်းကာ Amelia Aranda Huete မှ Federico de Madrazo ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူသည်။
Tags:carrera y က carrera • သမိုင်းဝင် • စိတ်ဝင်စားခြင်း • ရတနာ • သဘာဝ • ပုံတူ
မှတ်ချက်0ခုCarrera y Carrera: ပုံတူမှရတနာ"